RASMI: Goolhayihii iyo Goolkii ugu fiicnaa sanadka ee FIFA The Best oo lagu dhawaaqay – Gool FM
RASMI: Goolhayihii iyo Goolkii ugu fiicnaa sanadka ee FIFA The Best oo lagu dhawaaqay
Haaruun September 23, 2019
(Milan) 23 Sebt 2019. Waxaa la shaaciyey abaal-marinno kale sida Goolhayihii ugu fiicnaa ragga iyo Dumar & sidoo kale goolkii ugu fiicnaa sanadka ee abaal-marinnada caawa lagu bixinayo Magaalada Milan ee FIFA The Best.
Goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson Becker ayaa ku guuleystay abaal-marinta goolhayaha sanadka 2019 ee FIFA The Best kaddib markii uu kooxda Liverpool la qaaday Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Waxa uu sidoo kale Alisson la qaaday xulkiisa qaranka Brazil Copa America, kaddib markii ay kulankii Final-ka aha aka badiyeen xulka Peru.
Alisson Becker waxa uu abaal-marintan ku garaacay goolhayaha ay isku waddanka yihiin ee Ederson kaasoo kooxdiisa Manchester City la qaaday saddex koob oo maxali ah iyo goolhayaha kooxda Barcelona ee Marc ter Stegen kaasoo isna kooxdiisa la hantay horyaalka La Liga.
Dhinaca kale goolhayaha sanadka ee Dumarka ayaa markii ugu horreysay ee abaal-marinta la bixiyo waxaa goolhayaha sanadka ee dumarka ku guuleysatay kabtanka xulka qaranka Holland ee Sari van Veenendaal oo wacdarro ka dhigtay Koobkii Adduunka ee sanadkan lagu qabtay France.
Waxa ay sidoo kale gabadhan wacado ka soo dhigtay sanadkii hore kooxda Arsenal waxaana ay haatan ka tirsan tahay naadiga Atletico Madrid.
Geesta kale waxaa la bixiyey abaal-marinta Goolka sanadka waxaana abaal-marinta FIFA Puskas Award ku guuleystay Daniel Zsori kaddib goolkii labo lugootiska ahaa ee uu ka dhaliyey kooxda dalka Hungary ee Debrecen.
Xiddigan 18-sano jirka ah ayaa kulankiisii ugu horreyay u dheelayay kooxdiisa waxaana uu ku qaaday abaal-marinta Pukas Awarad.
Waxa uu abaalmarinta ku garaacay Lionel Messi oo aan marnaba abaal-marintaan ku guuleysanin kaasoo isna gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Real Betis iyo xiddiga River Plate ee Fernando Quintero oo laad xor ah u dhaliyay kooxdiisa sanadkan.
RASMI: Shaxda Kooxda sanadka ee abaal-marinta FIFPro World XI oo si rasmi loogu dhawaaqay